Akanjo fitafiana | Mpanamboatra ambongadiny, mpamatsy
2021 Factory Women Sashes Sequin Diamond Sexy Bodycon hariva akanjo
Akanjo fampiakanana diamondra manjelanjelatra mamirapiratra, v-neckline mahatsikaiky miaraka amina endrika voafintina, fahatsapana tsipika mahery, manasongadina ny endrika tonga lafatra. Akanjo mahafatifaty no fanomezana mety indrindra ho an'ny vadinao na ny sakaizanao ary gaga ny olon-tianao! Io akanjo diamondra mamirapiratra io ihany koa no safidy tsara indrindra ho an'ny fety, trano fandihizana, fampakaram-bady, lanonam-pisakafoanana, akanjo isan'andro ary hetsika hafa.
Vehivavy Sexy Sequin Diamond Spaghetti Strap Party Dress Bodycon Dress Women
Akanjo fampiakanana diamondra manjelanjelatra mamirapiratra, tendany boribory ambany vozona miaraka amina famolavolana tery, fahatsapana tsipika mahery, manasongadina ny endrika tonga lafatra. Akanjo mahafatifaty no fanomezana mety indrindra ho an'ny vadinao na ny sakaizanao ary gaga ny olon-tianao! Io akanjo diamondra mamirapiratra io ihany koa no safidy tsara indrindra ho an'ny fety, trano fandihizana, fampakaram-bady, lanonam-pisakafoanana, akanjo isan'andro ary hetsika hafa.
Io akanjo manahirana fanjairana mahavariana io dia lamaody sy mahatsikaiky, ka mahatonga ity vanim-potoana fety ity hahagaga kokoa. Akanjo hariva hariva lava lavalava mahafinaritra ity dia namboarina tamin'ny kofehy sy zaitra. Akanjo fihodinam-bolo mety indrindra amin'ny alin'ny fety anao io.
Akanjo avo lenta matevina vita amin'ny kofehy tsara tarehy lava telo-telovolana Sleeve mahazatra Plus Size Women Maxi Dresses
Akanjo mareva-doko O-hatoka 3/4 akanjo lava vita amin'ny volon'ondry vehivavy ity vita amin'ny akanjo chiffon sy dantelina, maivana sy malefaka. Mety amin'ny fety, fanasana na fotoam-pomba hafa.
Namboarina tany Shina mifanohitra amin'ny lokony Plus akanjo miakanjo vehivavy vehivavy kanto miakanjo mahazatra
Ity akanjo chiffon kanto sy maivana ity dia misy tanany fohy eny an-tsoroka ary famolavolana sisin-tany fotsy manakana ny loko, izay manampy endrika manaitra ary milay sy mahazo aina. Ny akanjo sosona dia mamoaka endrika hariva mahafinaritra izay tsy manam-paharoa. Mety amin'ny fety, fanasana na fotoam-pomba hafa.
Akanjo chiffon smock Maxi suspender, zipo suspender mamirapiratra miaraka amin'ny lobaka chiffon maivana, mahazo aina, fofonaina, mahafatifaty ary mahafinaritra. Ity akanjo hariva ity dia mety tsara amin'ny hetsika isan'andro, fety hariva ary klioba.
Vehivavy masiaka Sexy Size S-5XL Plus Size slit ao ambadiky ny bodycon eny amin'ny akanjon'ny chiffon amin'ny soroka mandritra ny fahavaratra
Ny tohatra tohatra dia hahatonga anao ho tsara tarehy sy mahafatifaty.
Ny famolavolana bodycon dia afaka mampiseho ny endrikao tsara.
Mety amin'ny fety hariva, fanasana, klioba sns.
Amazon hot style sexy halter strap backless midi Slim akanjo pensilihazo zipo vehivavy akanjo
Ny akanjo antsamotady dia lamaody sy lamaody, ary ny endrika akaiky dia manasongadina ny endrikao. Mampiasà lamba milamina sy maivana ary mifoka rivotra. Misy ny akanjo fety sy akanjo isan'andro.
Amazon mafana Slim 2021 Eoropeana sy amerikana fahavaratra vokatra vaovao vita pirinty Halter Split Hip Skirt Vehivavy akanjo lava
Ity akanjo ity dia vita amin'ny lamba elastika sy ahazoana aina, malefaka sy mifoka rivotra, mahatonga anao hahatsapa tena salama sy ahazoana aina. Ity akanjo ity dia toa lamaody sy mahia. Ny akanjo tery tery, ny halavany ambonin'ny lohalika, ary ny hatoka boribory mahazatra, dia asehoy tsara ilay sary mamoafady anao. Mety amin'ny hetsika mampiaraka isan'andro sy ny hetsika fety.
Fahatongavan'ny vehivavy vaovao tsy miverina miovaova Spaghetti fehin-kibo akanjo Famatotra vehivavy Dye akanjo Club akanjo ho an'ny antoko Club
Ity akanjo ity dia vita amin'ny lamba elastika sy ahazoana aina, malefaka sy mifoka rivotra, mahatonga anao hahatsapa tena salama sy mahazo aina rehefa mitafy azy. Ny endrika mifatotra-loko ary ny fomba manify dia manasongadina ny hatsaran'ny toetranao.
Akanjo vaovao Vehivavy lava lava miamboho ambany fehikibo fehikibo fehin-kibo Blouse Akanjo lobaka akanjo mahazatra
Ity akanjo ity dia vita amin'ny lamba elastika sy ahazoana aina, malefaka sy mifoka rivotra, mahatonga anao hahatsapa tena salama sy mahazo aina rehefa mitafy azy. Ny famolavolana lapel dia mifanaraka amin'ny famolavolana fehikibo hanehoana ny toetranao.
DR80041 OEM miampy habe o vozon'ny vava elastika maxi satin lava tanany lava kanto voninkazo bodycon fehin-kibon'ny akanjo fararano fararano
Ity akanjo voninkazo lava lava lava ity dia tena kanto, mety amin'ireo drafitry ny faran'ny herinandro ireo. Faritra malalaky ny felam-boninkazo, firavaka lamaody, manatsara ny toetranao. Tianay be io akanjo io, miaraka amin'ny kiraro avo vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy ary misy kavina voavoatra ho anao manokana.
Endri-javatra manan-danja ao anatin'izany ：
Karazana modely: voninkazo
Karazana: tsipika iray
Halavan'ny tananao: Sady lava / tsy misy tanany
Karazan-tànana: Sleeve mahazatra
Andalana valahana: Valahana avo
Vanim-potoana: lohataona / fararano / fahavaratra